Traditional customs – iAfrika
Tags Amasiko esintu, Ezenkolo, Religion, Shembe, Traditional customs
Tags Imicimbi yesintu, marriage, Traditional Ceremonies, Traditional customs, Umshado
Kubalulekile ukuthola abantwana kumuntu noma kubantu asebeganene. Abantwana bayisibusiso esivela kuMdali nasemadlozini, futhi isibongo somndeni kunenkolelo yokuthi ngeke sishabalale uma kunezingane zabafana kulowomuzi. Kunezinto esiningi ezingaba yimbangela yokungabikho kwabantwana kulabo abasuke sebeganene, okungaba amaphutha enzeka ekhaya kamakoti noma amaphutha enzeka emzini (ekhaya kwamkhwenyana). Okusho ukuthi kungaba ulaka lwabaphansi. Kwezinye izindawo umuntu akayekwa kodwa uyageqwa ukuze … Read more
Tags Amasiko esintu, Imicimbi yesintu, marriage, Traditional Ceremonies, Traditional customs, Umshado